ကုန်သွယ်ရေး ExpertOption ပလက်ဖောင်းဝင်ရန်လမ်းညွှန် | Option Trading - စတော့အိတ်ချိန်းကိုအွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
အဆိုပါ ExpertOption platform ပေါ်တွင်အရောင်းအဝင်မှမည်သို့ကိုလမ်းညွှန်
အဆိုပါ ExpertOption ပလက်ဖောင်း၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဦး Mini ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ExpertOption mini ကိုအကောင့်
ExpertOption သည်ဗီယက်နမ်ကုန်သည်များအားအွန်လိုင်းတွင်ငွေရှာရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသောရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတော်အတန်အသစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကုန်သည်များအနေဖြင့်ငွေအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နေသည်ဟုပြောရန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်ပေးသောအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုအပေါ် ၉၆% အထိထိရောက်သောအမြတ်အစွန်းကိုရရှိရန်တန်ဖိုးထားကြလိမ့်မည်။
သငျသညျဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်နေနှင့်ဤပလက်ဖောင်းပူးပေါင်းစဉ်းစားလိုက်လျှင်ဤ mini ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြလိမ့်မယ် expert option.
အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုပွဲစားပါ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်မည်၊ ကျဆင်းမည်ကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ သင်မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတွက်ချက်လျှင်အမြတ်ရလိမ့်မည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်သည်မမှန်ကန်ပါကသင်လောင်းကြေးပမာဏကိုသင်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
ExpertOption အပြည့်အဝတစ်ဦးကိုရုရှားအခြေစိုက်လွတ်လပ်သောစည်းမျဉ်းခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသော FMRRC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံနှင့်သငျသညျရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆန္ဒရှိငွေပမာဏပေါ် မူတည်. သင်သည်4ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနိမ့်ဆုံးသိုက် $ 50 ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြုလုပ်နေဆဲအတော်လေးနိမ့်ပါတယ်။ ဒီအကောင့်ကိုတစ်ဦး 50% ဆုကြေးငွေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်မန်နေဂျာကလာပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်သွယ် session တစ်ခုနှင့်အပတ်စဉ်ထုတ်စာစောင်ပျဉ်ပြားမှအကျိုးပါလိမ့်မယ်။
ငွေအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနိမ့်ဆုံးသိုက် $ 250 ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကောင့်ဖွင့်လှစ်အပျေါမှာ, သင်ထားတဲ့ 80% ဆုကြေးငွေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမန်နေဂျာလိမ့်မယ်။2သင်တန်းများလည်းရှိပါတယ်။
ဒီအကောင့်ကို $ 1000 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်ပြီးတစ်ဦး 100% သိုက်ဆုကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်။ သင်တို့သည်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးမန်နေဂျာ4နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများရပါလိမ့်မယ်။ ရွှေအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူကိုလည်းအထူးရုပ်သိမ်းရေးအခွင့်ထူး (ထုတ်ယူပိုမြန်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်) ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒီအကောင့်ကို $ 25000 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်ပြီးတစ်ဦး 125% သိုက်ဆုကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်။ ဒီအကောင့်အမျိုးအစားတစ်ခုမှာအခွင့်ထူးသငျကိုယျတိုငျကစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင်တို့သည်လည်းထုတ်ယူနေ့စဉ်စီးပွားရေးဆန်းစစ်ဖို့လက်လှမ်းနှင့်တက်ရောက်ရန်အမြန်ကြပါလိမ့်မယ် expert option လေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာတွေ။
အဆိုပါ4အစစ်အမှန်အကောင့်အပြင်, ExpertOption လည်း $ 10000 ကို virtual ငွေသားနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုနေတဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ပေးပါသည်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူသင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲပလက်ဖောင်းများ၏ခံစားရဖို့စေသည်။ ၏သင်တန်း, အစစ်အမှန်အကောင့်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုယင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ပထမဦးဆုံးလုံခြုံစွာနေတဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကို အသုံးပြု. ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအကြံပြုပါတယ်။ သင်ဆဲရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်အသစ်ဆိုရင်အပြင်, သင်ပထမဦးဆုံးအသေးဆုံးသိုက်ငွေပမာဏနှင့်အတူအကောင့်နဲ့ start အကြံပြုပါတယ်။ သင်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်မှုပေါက်ပြီးတာနဲ့သင်အမြဲပိုကြီးတဲ့အကောင့်အမျိုးအစားပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်သည်။
ExpertOption သည်ကုန်သွယ်ရန်လွယ်ကူသောရွေးချယ်စရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင်ကိုကောင်းစွာချထားပြီးသွားလာရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအကောင့်အမျိုးမျိုးရှိသည့်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ နည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်အခြားအရာများဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးသောအိုင်ကွန်များကိုလွယ်ကူစွာနားလည်စေသည်။ ကုန်သွယ်ရေး entry လည်းအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်များအားလုံးသည်အပေါ် 'သို့မဟုတ်အောက်' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအင်္ဂါရပ်အားလုံးသည်စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်ဤပလက်ဖောင်းကိုလျှင်မြန်စွာစတင်ချင်လျှင်၊ ဒီလမ်းညွှန်ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏အကောင့်အတွက် logged င့်ပြီးတာနဲ့လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်ကုန်သွယ်မှုလိုသောပိုင်ဆိုင်မှုကို select ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Brent ဆီကဲ့သို့ကုန်စည်ထံမှငွေကြေးအားလုံးအထိ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တို့၏မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဘယ်ဖက်မှာကုန်သွယ်မှု '' icon ကို click လုပ်ပါ။
Next ကို, သင်ဇယားအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်အညွှန်းကိန်း, drawings နဲ့အခြားအပိုဆောင်း features တွေရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်သင့်ကုန်သွယ်မျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူကုန်သည်ပိုပါပဲသည်အထိပျမ်းမျှရွေ့လျားတူသောရိုးရှင်းသောဇယားများနှင့် tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောင့်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ interface ကိုလက်ျာဘက်ဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားရဲ့အနည်းဆုံးစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုလိုင်းရှိသင့်
သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်၏လက်ဘက်။ ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှု Watch ။
သင်နှင့်အတူကုန်သွယ်ချင်သောပမာဏနှင့်သင့်အနေအထားကိုင်ထားရန်ဆန္ဒရှိအချိန်ပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်သပိတ်စျေးနှုန်းကိုရွေးပါ။ သငျသညျကုန်သွယ်မှု entry ပေါ်မှာ p '' ကိုရွေးချယ်ပါလျှင်ရိုးရှင်းစွာအထား, သင်စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်တွင်သပိတ်စျေးနှုန်းအထက်ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ထား။ သငျသညျကုန်သွယ်မှု entry ပေါ်မှာ '' ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ပါကသင်စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်တွင်သပိတ်စျေးနှုန်းထက်နိမ့်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထား။
သင်ပြုသောအနေနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, အထ 'သို့မဟုတ်ဆင်း' ခလုတ်ကိုဖြစ်စေအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Tags: expert option အပျငှေ, expert option သိုက်ဆုကြေးငွေ, expert option သိုက်နည်းလမ်းများ, expert option သိုက် options များ, expert option မိသိုက်, expert option နိမ့်ဆုံးသိုက်, အတွက်ငွေသွင်းဖို့ဘယ်လို expert option, နိမ့်ဆုံးသိုက် expert option